Abantu base-Alex “banjengegolide elikhishwe odakeni” | Scrolla Izindaba
Abantu base-Alex “banjengegolide elikhishwe odakeni”
Umsakazi uItumeleng Banda ukhule ehlala e-Sandton, efunda esikoleni esibizayo futhi ejabulela izikhathi ezimnandi.
Kodwa ngesikhathi eneminyaka eyisishiyagalombili, yonke into yashintsha.
Umawakhe, owayesebenza ezindlini, walahlekelwa umsebenzi ngesikhathi abaqashi bakhe beya e-Australia.
UItumeleng nomawakhe kwadingeka ukuba bathuthe beyohlala elokishini lase-Alexandra.
Kwakungamakhilomitha ambalwa nje ukusuka e-Sandton uye e-Alex, kodwa noma kunjalo lezi zindawo imhlaba emibili eyehlukene.
“Nganginamahloni nge-Alex,” kusho uItumeleng, oneminyaka engama-23 ubudala.
“Le ndawo yaziwa ngobubha, ukwehluleka kanye nobugebengu.”
Kodwa owesifazane osemusha ozimisele akazange avumele impilo emigwaqeni yase-Alex imvimbe.
Namuhlanje, uItumeleng uphila iphupho lakhe.
Ungumsakazi wezemidlalo osebenzisana nosaziwayo abafana noDJ Sbu, uJabu Mahlangu, uPenny Lebyane kanye nabanye.
Uqale ukusebenza emsakazweni ngowezi-2011 njengomfundi.
Kodwa ungene kwezokusakaza ezemidlalo ngowezi-2018 ngemuva kokunikwa ithuba ngumsakazi osemnkantshubomvu kwezemidlalo, uMotshidisi Mohono.
“Bengingazi lutho ngezemidlalo, ikakhulukazi ibhola. Kodwa uMotshidisi wangibamba ngesandla wangikhombisa izintambo.
UItumeleng usahlala e-Alex namanje. Akakaze alishiye ilokishi.
“I-Alex kwakungeyona indawo embi njengoba ngangicabanga ngesikhathi ngisuka e-Rivonia ngiza elokishini. Baningi abantu abanethalente e-Alex,” kusho u-Itumeleng.
“I-Alexandra inamadayimane amaningi – abantu abenza kahle kuzwelonke ngisho nasemazweni omhlaba. Sinjengegolide elikhishwe odakeni.”
UItumeleng ungumphathi we-Feminine First Touch kwi-Massive Metro njalo ngoLwesibili phakathi kwehora lesi-6 kuya kwe-7 ntambama.